Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maamul cusub u magacaabay Gobalka Mudug. – STAR FM SOMALIA
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa maamul cusub u magacaabay Gobalka Mudug.
Munaasabad ka dhacday magaalada Gaalkacyo, ayaa waxa uu Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed kaga dhawaaqay Xubno cusub oo uu u magacaabay Gobalka Mudug.
Madaxweyne Gulleed ayaa magacaabay Guddoomiyaha cusub gobolka Mudug iyo ku-xigeenadiisa, kadib markii uu sheegay inay xoogeysatay baahiyaha loo qabo in maamul cusub loo magacaabo Gobalka Mudug.
Inta ay munaasabada soctay ayaa waxaa ka hadlay qaar kamid ah Wasiirada Galmudug ee madasha goobjooga ka ahaa waxa ayna aad usoo dhaweeyeen Guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay gobalka Mudug, waxayna kula dardaarmeen inuu howshiisa si Wadaniyad ah ka muuqato u guto.
Wareegtada kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Guuleed ee lagu magacaabay Masuuliyiintaasi ayaa u qorneyd:
1-Cabdirashiid Xaashi Cartan Gudoomiyaha Gobalka Mudug
2-Mudane Cabdi Xuseen Sheikh Ahmed Gudoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Siyaasada iyo Amniga ee gobolka
3-Axmed Maxamed Shire Guddoomiye Ku-xigeenka Maamulka iy Maaliyadda ee gobolka
4-Maxamed Ali Adan Guddoomiye Ku-xigeenka Arimaha Bulshada ee gobolka
waxaa maanta lagu aasay qabuuraha Isbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho Marxuum Maxamed Axmed Gurxan